မြန်မာ့သားကောင်း: ဒုသမ္မတအသစ်တစ်ယောက် ရွေးလိုက်ကြရအောင်
မထင်မှတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် အနားယူသွားလို့ သူ့နေရာကို စစ်တပ်ကတစ်ယောက် ရွးချယ်ပေးဖို့ရှိနေပြီး တပ်မတော်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ (သို့) လက်ရှိတပ်မတော်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။
လစ်လပ်နေတဲ့ ဒုသမ္မတတစ်နေရာနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့လည်း လွှတ်တော်၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေ နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ပြည်သူတွေကြားမှာ ပြောဆိုနေကြတာတွေ ထင်ကြေးနဲ့ရွေးချယ်ပေးနေကြတာတွေ၊ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုယ် ဖြစ်စေချင်နေတာတွေ ရွေးချယ်ပေးနေကြတာတွေကို ကြားနေ သိနေရပါတယ်။
ပထမတုန်းက ကြားရတာကတော့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေကို တပ်မတော်သားကိုယ်းစားလှယ် ဒုသမ္မတအဖြစ် လွှတ်တော်မှာအဆိုပြုထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့နာမည်လည်း ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေပါတယ်။
အခုတစ်ဖန် နောက်ထပ် ဒုသမ္မတဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့လူတွေကို လွှတ်တော်ထဲမှာ တီးတိုးပြောနေသံ ကြားနေရပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်း၊ ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဥက္ကဌ ဦးတင်အေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရော ဘယ်သူ့ကို ရွေးချယ်ချင်ပါသလဲ?
At 8/12/2012 01:55:00 PM
YoU wAnT yOuRsElF?
Nwe August 13, 2012 at 5:32 AM
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ပညာအရည်အချင်းကောင်းပြီး သံတမန်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေး ဘက်စုံတော်ရမယ် ဒီလိုတွေပုံကြည့်ရတာ ပညာတတ်ပုံစံမပေါက်သလို အရည်အချင်းရှိမယ့်ပုံလဲမရှိဘူး နိုင်ငံတကာအလယ်မှာပွဲမတိုးဘဲ အရှက်ကွဲရမယ့် ကိန်းဘဲ စစ်ခေါင်းဆောင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီဘက်က လူဘဲဖြစ်ဖြစ် ပညာတတ်ပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူခေါင်းဆောင်လုပ်တာဘဲကြိုက်တယ်
I Like U KOKo
I Like Nyan Htun
ရွှေမိုး August 13, 2012 at 10:02 AM
အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်းပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဦးတင်အေးက စစ်သားမှ မဟုတ်တော့တာ၊ ညီ့းတေ့ ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ၊ သူ့ကိုေ၇ွးလိုက်ရင် ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ရာထူးပါ ထည့်လိုက်ဖြည့်နေရဦးမယ်တိုတော့ အလုပ်၇ှုပ်ပါတယ်
u maung maung August 13, 2012 at 11:23 AM
General NYAN HTUN is straight man.
Unknown August 14, 2012 at 11:00 AM